KN95 Kirasi Maskï¼Œ Ear Loop Disposable Face Maskï¼Œ Kurapwa Kwekukoshwa Kwemberi Thermometerï¼Œ Medical Dziviriro Magirazi ï¼Œ Virus Kuwanikwa Reagents, Vagadziri, Suppliers, Wholesale - ZhongXinChuang
Kambani yedu inonyanya kugadzira inodzivirira-chirwere chekudzivirira zvigadzirwa, iyo mikuru mikuru ndeiyi: KN95 Kirasi Mask, Ear Loop Disposable Face Mask, Medical Infrared Forehead Thermometer, magirazi ekudzivirira ekurapa, Virus ekuona bhokisi uye zvimwe zvinoshandiswa pakurapa. Chitupa chekambani chakakodzera chakakwana, FDA, CE mbiri chitambi, zvigadzirwa zvinogona kutumirwa kune zvinopfuura nyika mazana maviri pasirese
N95 antivirus masiki ane vharafu
Chekufemesa chinonzi n95
Fold flat mask, N95 yakajairika guruva maski N95 yakajairika yakapetwa kumeso masiki Kusvikira makumi mashanu nguva yekudzivirirwa kubva pane zvakanaka zvisina-muchetura dhiraini, mafirita uye ane mhete mists. Yakavhara nyaradzo panguva yekushandiswa kwenguva refu. Kushandiswa kumwe chete. Inoshandura kuN95 yakajairika, inokwana kuita 95% kusefa kwefaira. Inopihwa mumwe nemumwe yakaputirwa
Kugadziriswa pakarepo inactivates hutachiona hwekutarisa, iyo inogona kunyatso kuderedza kupararira kwehutachiona; zvakajairika PCR kuongororwa reagents uye fluorescent kuwanda PCR kuongororwa reagents .that Nucleic acid yekuongorora reagents inogona kushandiswa kuona matsva coronaviruses.
Medical Infrared pahuma Thermometer Ndiwo Muviri infrared Thermometer Pfuti, YEMWE YEMASANGANO KUTI ISHURE-Usatofanira Kubata, Kuchena Uye Hutano Kudzivirira Kuyambuka.Kutarisana nehutachiona hwehutachiona uye new coronavirus, inobvumira vanhu kuyera kupisa kwemuviri pasina kubata mumwe neumwe. Dzivisa kusangana nehutachiona hutachiona.